It is me. Ko Niknayman.: သခင်စိတ်ဓါတ်။
စီဘောက်စ်မှာ မဆဲကြပါနဲ့ ဆဲကြပါလို့ ကျွန်တော့်တော့မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဒါဟာလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀န်းပေါ်တာဝန်ယူမှုအပိုင်းနဲ့ သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ လူ့အသိုင်းအ၀န်းပေါ်မှာ သူ့အမြင်၊ သူ့သဘောထားကို သူလက်ခံထားတဲ့ လူ့အဆင့်အတန်းနဲ့တုန့်ပြန်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လူ့အသိုင်းအ၀န်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲတာကိုတော့ လူမြင်ကွင်းနေရာတွေမှာ လူတွေကြားထဲမှာ လူ့ယဉ်ကျေးလိုိ့ ခံယူထားတဲ့ လူတွေကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့၊ ကမ္ဘာမှာလူယဉ်ကျေးရယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့၊ လောကနီတအဆုံးအမတွေ ကြားထဲကဖြတ်သန်းလာတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာတွေကတော့ ဆဲဖို့ဆိုဖို့နှုတ်မရဲကြပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာကို ကိုယ်ပဲထိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမထိန်းနိုင်ပါဘူး။ စီဘောက်စ်မှာ ဆဲတာင့ါကိုလူသိတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုလူမြင်တာမဟုတ်ဘူး အားရပါးရဆဲကြတာ ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ လူ့အဆင့်အတန်းကို ကိုယ်ဖော်ပြတာပါ။ ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါတယ်။
ကိုယ့်အမျိုးကိုကိုယ်တကယ်ချစ်ရင် ကိုယ့်စာနဲ့ကိုယ့်စကားကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလေးစားမြတ်နိုးပါတယ်။ ကိုယ်လေးစားမြတ်နိုးတဲ့စကားနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေဆဲဆိုတာ တကယ်တော့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါ။ ဗမာစာသည်ဒို့စာ။ ဗမာစကားသည်ဒို့စကား။ ဒို့စာကိုမြတ်နိုးပါ။ ဒို့စကားကိုလေးစားပါ။ လို့ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးက သခင်စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့သခင်မျိုးမြန်မာစစ်စစ် မျိုးချစ်တွေက သေသေချာချာပြောခဲ့တာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ ရိုးမသွားပါဘူး။ (ခြွင်းချက် - ဤနေရာတွင် ဗမာဟုသုံးနှုန်းခြင်းသည် မူရင်းအတိုင်းသာသုံးချင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါသည်။)
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြင့်မားဖို့ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ မြင့်မားဖို့လိုပါတယ်။ ရင့်ကျက်ပြီး တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမ မြောက်မြားစွာ လိုအပ်နေပါတယ်။ သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ တပ်မတော်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ အားလုံးပေါင်းပြီးမှ ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ Globalisation - Global-is-Asian ပြောရလောက်အောင်ကို အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
တရုတ်ကိုကြည့်မလား၊ အိန္ဒိယကိုကြည့်မလား၊ ယိုးဒယားကို ကြည့်မလား၊ မျိုးဆက်ပြတ်လောက်နီးနှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားကိုကြည့်မလား၊ စစ်ဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာ ခံခဲ့ရတဲ့ဗီယက်နမ်ကိုကြည့်မလား အားလုံးခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုစီကိုချီတက်နေကြတာချည်းပဲ။
နယ်စပ်ကနေ ခဏလောက်ရပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးရတဲ့အဖြစ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ သယံဇာတပေါကြွယ်အ၀ဆုံးနိုင်ငံ၊ ပထ၀ီရေမြေ အနေအထားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံ၊ နယ်မြေအကျယ်အ၀န်းအကြီးဆုံးနိုင်ငံ . . .မျက်ရည်ကျရပါတယ်။ ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင်ခံစားရတယ်။ ပညာရေးကိုကြည့် ဒါပြောဒါသင်ဒါကျက်ဒါဖြေ စနစ်ကနေမတက်နိုင်။ စီးပွားရေးကိုကြည့် မြန်မာ့ငွေကြေးစနစ်ခိုင်မာနေပုံများ အပြင်ထွက်တာနဲ့ မျက်လွှာချနေရတဲ့အဖြစ်။ ကျန်းမာရေးကိုကြည့်မလား ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးဟောင်းလောင်းနဲ့လူနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်။ စားဝတ်နေရေးကိုကြည့်မလား မြန်မာမှာ ငတ်လို့သေနေကြပြီ။
မကြာခင်ကပဲ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က မြန်မာပြည်ကလူပေါင်း ၅သိန်းကျော်ဟာ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ညအိပ်ယာဝင်နေရကြောင်းပြောသွားတယ်။ ဆီကိုရေချိုး၊ ဆေးရိုးမီးလှုံ၊ စပါးတောင်လိုပုံဆိုတဲ့ မြန်မာတွေ၊ ရွှေလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာတွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ မျက်နှာငယ်စွာနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်အနှိပ်စက်ခံပြီး အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်နေရတယ်။ အများစုကိုပြောတာပါ။ ဒါတွေအားလုံးကိုအရင်းစစ်ကြည့်ပါ။
ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။ သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း။ တပည့်မကောင်းဆရာ့ခေါင်း။ တိုင်းပြည်မကောင်း အစိုးရခေါင်း။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီမိုကရေစီကို မစားရ၀ခမန်းတောင်းဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရွံမုန်းနေလို့ပါ။ ဘာလို့လဲ။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ချွတ်ချွတ်ချုံကျနေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကို ကောင်းစားစေချင်လို့။ အမိမြန်မာပြည်ကိုဘာလို့ကောင်းစားစေချင်တာလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ပေါ့။ သေနတ်ကိုင်မှ၊ ယူနီဖောင်းဝတ်မှ တိုင်းပြည်ချစ်၊ လူမျိုးချစ်ပြီး ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို စောင့်ရှောက်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ရင်း ရောခ့်သီချင်းနားထောင်ရင်း ဟစ်ဟော့ရေးစီးကြောင်းထဲမှာစီးမျောရင်း တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒေးပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူမျိုးနဲ့ ကိုယ်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာကို စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ အသက်ပေးပြီး တိုင်းပြည်ကို ချစ်ပြသွားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာလို့ဆင်းရဲနေတာလဲ။ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးရဲ့စကား ခဏငှားပြောမယ်။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့အစိုးရက သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်နေမှတော့ အဲဒီတိုင်းပြည်ဘယ်မှာလာတိုးတက်ဖို့အချိန်ရှိတော့မလဲတဲ့။ သူ့မှာ ပြည်သူအရင်း တွေကိုပဲ အရေးယူရ။ ခုတ်ရ။ ထစ်ရ။ သတ်ရနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်နေရတာကိုး။ ခုတ်မှာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်တာကိုး။
အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြောတာကိုး။ ဒါဆို အစိုးကရော တကယ်ကောင်းနေလို့လားဗျာ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင် အမြင်မတော်တာတွေ့ရင်ပြောရမယ်။ ပြုပြင်ဖို့တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာ နိုင်ငံ့သားကောင်းတာဝန်ကို ထမ်းတာလေဗျာ။ အမြင်မတူရင် ရန်သူဖြစ်၊ တောင်စွယ်နေကွယ် သတ်စေဆိုသလို ပြည်သူတွေကိုဆက်ဆံနေမှတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်မှာလာ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးပြောတော့မှာလည်းဗျာ။ ဝေးဝေးကပဲချစ်တော့မှာပေါ့။ အဝေးရောက်တိုင်း တိုင်းပြည်ကိုမချစ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။
မြန်မာမှန်ရင် မြန်မာပြည်ကိုမချစ်တဲ့လူမရှိဘူး။ ကချင်လည်း ကချင်မှာမွေးပြီး ဂျပန်ရောက်နေလည်း မနောတိုင်ကိုချစ်တာပဲ။ ဂျောဘွန်တောင်ကိုသတိရတာပဲ။ ကယားလည်း အမေရိကားရောက်နေပေမဲ့ လွင်ကော်ကိုသတိရတာပဲ။ ကရင်လည်း ဖားစည်နဲ့ ဒုံးသံကြားရင် ဇွဲကပင်တောင်ကို အင်္ဂလန်ကနေသတိရတာပဲ။ ချင်းလည်း အိန္ဒိယမှာအခြေကျနေပေမဲ့ ခေါ်နုသုနမ်တောင်တန်းနဲ့ တောင်ဇလတ်တွေကိုသတိရတာပဲ။ ရှမ်းတွေလည်း သြစတျေးလျရောက်နေပေမဲ့ တို့ဟူးနွေးနဲ့ အင်းလေးကန်ကို တမ်းတတာပဲ။ မွန်တွေလည်း ဥရောပမှာ နေထိုင်နေရပေမဲ့ မော်လမြိုင်က ရေစိမ်မုန့်ဟင်းခါးလေးနဲ့ ကျိုက္ခမီကိုသတိရမှာအမှန်ပဲ။ ရခိုင်လည့်း ကိုရီးယားရောက်နေပေမဲ့ မြောက်ဦးက ရှစ်သောင်းဘုရားနဲ့ ရခိုင်သင်္ကြန်ကို အရမ်းလွမ်းမှာပဲ။ အကြောင်းကြောင့်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်အပြင်ရဲ့ အဝေးတစ်နေရာရောက်နေကြပေမဲ့။ မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ စိတ်ကတော့ ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးဗျ။
ပြီးတာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီ။ မဖြစ်သင့်တာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီ။ မနစ်နာသင့်သူတွေလည်းနစ်နာခဲ့ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့တွေဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ အမိန့်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်နစ်နာနေတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေသူတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးဘန်းပြပြီးအိပ်ထဲထည့် မစားရ၀ခမန်းအော်နေတဲ့သူတွေ၊ တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်လို့ တိုင်းပြည်နစ်နာနေတာကိုမကြည့်ရက်လို့ ကိုယ့်အိပ်ယာပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးကိုအဖေါ်ပြုပြီး ငိုနေရတဲ့သူတွေ၊ ဗမာမကောင်းဘူး။ ချင်းကောင်းတယ်။
ကချင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးစွဲဝါဒကြီးမားနေကြတဲ့သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးခ၀ါချပြီး လက်တွဲကြဖို့လိုပါပြီ။
တိုင်းပြည်အမှန်တကယ်နစ်နာနေပါပြီ။ အမိမြန်မာပြည်ကိုတကယ်ချစ်ရင် ကျွန်တော်တို့တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်အမှန်ကို သခင်စိတ်မွေးပြီးထူထောင်ဖို့လိုပါပြီ။ တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာ အဲဒီသခင်စိတ်ပါ။ သခင်စိတ်ကိုပြန်လည်အသက်မွေးပါ။ တပ်မတော်သားတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်သခင်လို့ခံယူရင် သခင်တစ်ယောက်လိုကျင့်ပါ။ ကျွန်သဘောက်လို အမိန့်အာဏာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး မဆောင်ရွက်ပါနဲ့။ တော်၏၊ မတော်၏။ သင့်၏ မသင့်၏။ ချင့်ချိန်ပါ။ တပ်မတော်ရဲ့ အဓိကရပ်တည်မှုကို ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ မေ့နေရင် သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကို ဆိုကြည့်ပါ။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့ ပြည်သူတွေက ယုံကြည်စွာနဲ့ အထူးအာဏာအပ်နှင်းပေးထားတာပါ။
တိုင်းသူပြည်သားလူငယ်တွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သခင်လို့ခံယူရင် သခင်တစ်ယောက်လို့ တွေးပါ။ ရေးပါ။ ကျင့်ကြံပါ။ လမ်းဘေးတေလေတစ်ယောက်လို ကျွန်သဘောက်လို သဘောမထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကို မမြှင့်သမျှ ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွပ်နေအုံးမှာပဲ။
ခပ်တိုးတိုးလေးရွတ်ကြည့်ပါ။ သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့မြန်မာလို့။ ကိုယ့်နာမည်အရှေ့မှာ သခင်တပ်ခေါ်ကြည့်ပါ။ သခင်စိတ်တွေတိုးပွားလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီသခင်စိတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကို ကျွန်အဖြစ်ကနေ
ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့တာ။ အခုလည်း ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ နိုင်ငံတော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါစို့။ သခင်စိတ်ဟာ ဂိုဏ်းဂဏကင်းတယ်။ မြင့်မြတ်တယ်။ လူမျိုးစွဲကင်းတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ကိုတက်ကြွစေတယ်။ အခုမှကမ္ဘာမှာခေတ်စားလာတဲ့ Leadership ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေဟာ လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွဲထဲက မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်လူငယ်တွေက လက်တွေ့အသုံးချအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး ကျွန်စနစ်ကနေရုန်းထွက် ပြခဲ့ပြီးပြီ။ အခုကျွန်တော်တို့အလှည့်ပဲ။
ပြီးတာတွေပြီးခဲ့ပြီ။ မေ့လို့မရနိုင်တာသိပေမဲ့ ပြီးတာတွေကို ပြင်လို့မှမရတော့တာလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ မဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေမဲ့အစား ဖြစ်နိုင်တာတွေကို အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ တပ်မတော်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားတွေ တိုင်းရင်းသားအားလုံးစုပေါင်းပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်နဲ့ ဆင်းရဲတွင်းထဲကို ထိုးကျနေပါပြီ။ ဘာလုပ်ကြမလဲ သခင်တို့။
(ရေးသားတင်ဆက်သူ - ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက်)
Posted by Ko Niknayman at 3:27 AM